ဒို့ဘာသာ (၄) အသဲထဲစွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒို့ဘာသာ (၄) အသဲထဲစွဲ
ဒို့ဘာသာ (၄) အသဲထဲစွဲ
Posted by ashinindaka on Aug 23, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
ရုပ်ပွါးတော် ရုပ်တုတော် ဆင်းတုတော်တွေကို
ရုပ်ပွါးတော်ဆိုတာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပုံတော်ကို ပွါးထားတာဖြစ်တယ်။
ရုပ်တုဆိုတာကလဲ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပုံတော်ကို တုထားထာဖြစ်တယ်။
ဆင်းတုတော်ဆိုတာကလဲ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆင်းကို တုထားတာသာဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘာလို့ ဒီရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊
တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊
ဆင်းတုတော်တွေကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေကို ကြည့်ပြီး
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ပွင့်ခဲ့တဲ့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့
ဘုရားရှင်ကို အလွယ်တကူ အာရုံပြုနိုင်အောင်လို့၊
အာရုံပြုနိုင်ပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို လွယ်လင့်တကူ
သတိရနိုင်ဘို့အတွက် ဘာသာရေးကျောင်းတွေ၊ အိမ်တွေမှာ
ရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေထားရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေ မထားဘဲ
မိမိရဲ့စိတ်က မိမိရဲ့ နှလုံးသားက
ဘုရားရှင်ကို ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို
အာရုံပြုနိုင်၊ အလွယ်တကူ ပြန်လည်သတိရနိုင်တယ်ဆိုရင်
ရုပ်ပွါးတော်၊ ရုပ်တုတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေ ထားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဦးဏှောက်ထဲဝယ် နှလုံးသားဝယ် အမြဲတမ်း ဘုရာတည်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
တချို့က ဒီလို နားမလည်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ရုပ်တုကိုးကွယ်သူတွေ
(Idol Worshippers) တွေလို့ ပြောကြတယ်။
ရုပ်တုထား၊ ရုပ်တုကို အလေးပေးတယ်ဆိုတာ
ဒီရုပ်တုနောက်က ဂုဏ်တော်အထိ စိတ်ရောက်အောင်
ရုပ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကို အတ္တဘောကိုတောင်
ဘုရားရှင်ကို ကြည့်ပြီး အတော်သဘောကျနေတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ရူပကာယ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ
အတော်ကြည့်လို့ ဖူးမျှော်လို့ ကောင်းမှာကိုး။
ဘုရားရှင် ဘယ်သွားသွား ဒီဘုန်းကြီးက
နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ကြည့်လေ့ရှိတယ်တဲ့။
ဟဲ့ ၀က္ကလိ၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ကြည့်နေရတာလဲဟဲ့။
ဒီငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်နေလို့ကတော့ ဘာမှ ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ဘူး။
တရားကို သိမှ ငါဘုရား (ဘာဆိုတာ) သိမယ် လို့ပြောပါတယ်။။
ဒါနဲ့စပ်လို့ ကြားဘူးတာလေး ပြောရအုံးမယ်။
တိပိဋက မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်နဲ့ တိပိဋက ယောဆရာတော်တို့
ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားဖြစ်တယ်။
ဘန်ကောက်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မြဘုရားကိုလဲ လိုက်ပို့ကြတာပေါ့။
တိပိဋက မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကတော့ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သွားဖူးတယ်တဲ့။
တိပိဋက ယောဆရာတော်က သွားမဖူးဘူးတဲ့။
သူ့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားကို အမြဲတမ်း သတိရနေကြောင်း၊
ဒါ့ကြောင့် ဘာဘုရား ညာဘုရားတွေ မလိုကြောင်း၊
ဘုရားဟာ အတူတူဘဲဖြစ်ကြောင်း စသည် စသည်ပြောပြပြီး
လိုက်ပို့တဲ့ကားပေါ်မှာ ဒီလိုပဲ ထိုင်နေခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရုပ်တုကို
တကယ်တော့ ဒီရုပ်တုကို အလေးပေးတာဟာ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံကို ကျေးဇူးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ သူတွေကို
ရုပ်တုထုလုပ်ပြီး အလေးပေးတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။
မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကိုယ့်အသက်ကို မငဲ့ကွက်ပဲ
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး ကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လဲ မြန်မာပြည် မြို့အသီးသီးရဲ့ အထင်ကရနေရာတွေမှာ
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကို ထားရှိပြီး အလေးပြုနေကြတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုဟာလဲ ရုပ်တုပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရုပ်တုကို ကြည့်ပြီး
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရကာ
ကိုယ့်ရဲ့မိခင် ဖခင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ပုံတူတွေ ဧည့်ခန်းတွေထဲမှာ
ဓာတ်ပုံဟာ တကယ်တော့ သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ လူကဖန်တီးထားတဲ့ စက္ကူပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး မိဘတွေရဲ့
မိဘတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ချိတ်ဆွဲထားကြတာပါ။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်တု၊ ဆင်းတုတွေကို
အိမ်၊ ကျောင်းတွေမှာ ထားပြီး အလေးပေးကြ၊ ကိုးကွယ်ကြတာလဲ ဒီနည်းတူပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တို့လို နိုင်ငံ့ကျေးဇူးရှင်တွေက
ဘုရားရှင်ကတော့ လောကီချမ်းသာ ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်အောင်
ချမ်းသာစစ်ဖြစ်တဲ့ လောကုတ္တရာချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရရှိအောင်
ညွှန်ပြပေးလို့ တကယ့် ဧရာမကျေးဇူးရှင်ကြီးပေါ့။
သောကြာနေ့မှ၊ တနင်္ဂနွေမှ သူတို့ဘုရားကို အမှတ်ရ ရှိခိုးကြသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ
မိမိတို့ရဲ့ ဦးဏှောက်ထဲ အသဲထဲ နှစ်လုံးသားထဲမှ
မိမိတို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားရှင် ထာဝရ အမြဲတမ်း စက္ကန့်မလတ်
တင်ပါ့ဘုရား။ ခက်တာက လူတွေက ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကိုဖူးတယ်ဆိုပြီး၊ ရုပ်ပွားတော်တွေကိုအမွှမ်းတင်ပုံဖေါ်ပြောင်လဲတာတွေလုပ်လာကြပြီး၊ ဒါကတော့ ဆုတောင်းပြည့်တယ်၊ ဒါကတော့ အကြံအောင်တယ်၊ ဒါကတော့ရာထူးတိုးတယ်၊ လဘ်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လာကြတာ မမြင်ချင်မကြားချင်ဆုံးဆိုတာ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲဘုရား။
ဘယ်အိမ်ကိုဘယ်ရုပ်ပွားတော်ကြွလာလို့ လာဖူးကြပါဆိုပြီး၊ အလှူခံကောက်တာကလဲ ၀င်လာမစဲပါဘုရား။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းကို ပညတ်ပါလျက်ကနဲ့ အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို လူတွေကဇောက်ချလုပ်လာကြတာ တနေ့တခြားပိုများလာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တုနှိုင်းမဲ့တဲ့ သဗ္ဗညု ဉဏ်တော်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းထက်၊ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်တလွှားသာမက ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေအထိပျံ့နှံ့ လို့နေပါပြီဘုရား။
ဒီနေ့ဘဲသတင်းစာထဲတွေ့ပါတယ်။ stainless steel စတီးသံမဏိနဲ့ပြီးတဲ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စေတီတော်ကြီးတည်အုံးမယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စက အခြားဘာသာခြားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လောက်အောင်ပါဘဲ…။
ငွေကို အကျိုးမဲ့ အချည်းနှီးနေရာတို့တွင် အလွန်အမင်း အသုံးပြုနေခြင်း။ ဥပမာ၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘာတုတော် ညာတုတော်များ ထုလုပ်ခြင်း။ ကြေးကမ္မ၀ါစာများ ပြုလုပ်ခြင်း စသည်။
လူတွေမှာ လောဘတွေ များနေတာရယ် .. သောကတွေ များနေတာရယ်ကြောင့်ပါ
လောဘ များတဲ့လူက ပိုပို ရချင်လို့ ရနိုင်မယ် ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ နေရာတိုင်း သွားကြတယ် .. ပြောသမျှ လိုက်လုပ်ကြတယ်
သောက များတဲ့လူတွေလည်း ထို့နည်းလည်းကောင်းပါ ..
ဒီအပေါ်မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်သူတွေ အမြတ်ထုတ်ချင်သူတွေကြောင့် .. ကြီးကိုးကြီးတို့ .. စွယ်တော် လေးဆူ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာတာ ..
တည်တဲ့လူတွေကလည်း ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး တို့ အမြင့်ဆုံးတို့ အကျယ်ဆုံးတို့ နောက်ကို လိုက်နေကြတာပါ ..
၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက လူကြီး ဆိုသူတွေကလည်း လိုက်နေတယ် .. သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေတောင်မှ အဲဒီနောက်ကို အပြိုင်အဆိုင် လိုက်နေကြတာ (စွပ်စွဲတာတော့ မဟုတ်ပါ .. အဲဒီလို မြင်မိလို့ပါ)
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် သမိုင်းဝင်စေတီတော်တွေရှိနေတာဟာ ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘုရား။
နောက်လူတွေအနေနဲ့လည်း ရှေ့ကရှိပြီးသားထိန်းသိမ်းတာအပြင် နောက်ထပ်သာသနာ့အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ စေတီတော်တို့ ဆင်းတုတော်တို့ တည်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်ဘုရား။ နောက်ပြီးတော့ ဘုရားတည်တာကုသိုလ်ရတယ်လို့ ကြားဖူးလို့ ၊ အဲဒါလေးကိုတော့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ရဲ့ ထေရ၀ါဒအုတ်မြစ်စာအုပ်သေးသေးလေး ရှာဖတ်လိုက်ပါအုံး။ အွန်လိုင်းမှာ ရတယ်မှတ်တယ်။
ဖတ်ပါဦးမယ်..။ တခြားသူတွေအတွက်ပါ.. လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါတယ်…။
ရွှေတိဂုံဘုရား ပေါ်တက်ပြီး ထီးတော်မှာရှိတဲ့ လက်စွပ် လက်ကောက် နားကွင်း အားလုံးကို ဆွဲးချချင်ပါတယ်ဘုရား အကုန်ရောင်းပြီး ပညာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက် လုပ်ပေးချင်တယ်
ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်က.. မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်တွေမှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်..။ ဒီဖက်အစွန်းရောက်လွန်းတော့..ဟိုဖက်အစွန်းကပြန်ထိမ်းညှိတာတွေ ဖြစ်လာတာလို့ထင်မိတယ်..။
… ရွှေတိဂုံစေတီဟာ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ရှေးဟောင်းအမွေဖြစ်တာမို့..ထိမ်းသိမ်းသင့်တာပေါ့…။ ထိန်းသိမ်းရင်း. အဲဒီအမွေတွေကနေ..နိုင်ငံခြားသား..တိုးရစ်တွေအ၀င်များအောင်လုပ်.. အဲဒီဝင်ငွေကို..အကျိုးရှိတာမှာသုံး..ဆိုတာမျိုးဖြစ်သင့်တာပေါ့..။
.. တစုံတဦး..တယောက်တို့က. ရည်ရွယ်.. .လှူဒါန်းပြဌာန်းထားတာကို.. မူရင်းလူဆန္ဒမပါပဲ.. အလွဲသုံးစားမလုပ်ကောင်းဖူးပေါ့..။
မလှူတန်းခင်ထဲက.. သာသနာဆိုင်ရာ..ပရိုဖက်ရှင်နယ်.. ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေက.. အကျိုးရှိတဲ့အလှူဆိုတာ ..ဘာလည်း… ဆုံးမသွန်သင်ပေးရမှာပေါ့…။ ပေးသင့်တာပေါ့..
ဆရာတော့်ပို့စ်လည်း.. ပွကုန်ပါပြီ…။ မှားတာတွေ့ရင် ထောက်ပြပါဘုရား.. တပည့်တော်က.. လူအသိုင်းအ၀ိုင်း..လောကီ..ရှုထောင့်ကပဲ.. ရေးတာမို့ပါ…။
ဦးဇင်းရေ..တပည့်တော်တော့အဖြေရပြီ…ဦးဇင်း အဖြေနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါအုံး…
အရှင်နာဂသေနဟာနတ်ပြည်မှစုတေရွှေ့လျားပြီး ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေရင်း ဂဇင်္ဂလအမည်ရှိတဲ့
မှာအရှင်နာဂသေနဟာ ပဋိသန်ဓေတည်နေခဲ့ပြီးတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကစပြီး
ယခုအချိန်ထိ ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာ နေလိုလိုထွန်းပေါက်ခဲ့တဲ့ မထေရ်လောင်းလျာလေးပေါ့။
အသျှင်သင်၏ ဆံပင်တို့သည်အဘယ့်ကြောင့် တပါးသောသူတို့၏ဆံပင်ကဲ့သို့
သူငယ်နာဂသေန က်ျအကြောင်း(၁၆)ပါးသောဘေးရန်တို့ကိုမြင်ရ်ျ ဆံပင်..မုတ်ဆိတ်တို့ကို့ 
(၁၆)..ဆံပင်တို့ကျွတ်ခဲ့ဖြတ်ခဲ့ကုန်သော် စိုးရိမ်ရကုန်၏ ပင်ပန်းရကုန်၏ ငိုကျွေးမည်တမ်းရကုန်၏
ညီမလေးပြောသလို လူနဲ့မတူအောင်လို့ ဖြေလိုက်ရင်တော့မရဘူးမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာသာခြားတွေ နောက်ပြီး ဥစ္ဆေဒ၀ါဒီသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာနက်နဲမှု့မရှိပါလားဆိုပြီး
တိုတိုနဲ့လိုရင်း ဘုန်းကြီးတွေကတုံးတုန်းရခြင်းအကြောင်းကို င်္ညမလေးနားလည်အောင်ပြောပြ
နေအိမ်ဝန်း (ကန့်ဘလူ) ကို သဘောကျသဗျာ။
အရှင်ဘုရား ဒါဆို ငရဲနတ်ပြည် ရှေးဘဝနောက်ဘဝ တကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဆရာတော့် ကပ္ပိယသဂျီးဆိုသူက မဟုတ်တမ်းတရားတွေလို့ ပြောလေ့ရှိလို့ ဆရာတော့်အမြင်ကို မေးလျောက်ကြည့်ခြင်းပါ။ သူများတွေက ဆရာတော်ကို သဂျီးတို့အုပ်စုနဲ့ တဂိုဏ်းထဲထားတာ မခံနိုင်ဘူးဖုရာ့….။
ဓမ္မာရုံ (ဂေဇတ်)ထဲ မှာ..တချို့ စာတွေ ကတပည့်တော်ရေးတယ်..
တချို့ ကတော့ဘုန်းကြီးတွေ စာပေါ့..
တပည့်တော်အတွေးတွေ က တော့ နော်..
အကြောင်းမသိကြရင်တော့..ဘယ်လိုတွေ ရေးပါလိမ့်အောင်းမေ့ ကြမယ်။
လောကီအတွေးတွေ ဘဲနော်.. လက်ခံတဲ့ သူ မခံတဲ့ သူ၇ှိမယ်…..
ရိုးရှင်းသောဘာသာအနေနဲ့ ပေါ့……..အစွန်းရောက်နေတဲ့ အတွေး…စိတ်
ဒီဂေဇတ်ကအသိုင်းဝိုင်းက တပည့်တော်ကျင်လည်နေတာတလခွဲ ဘဲရှိသေးတော့
တပည့်တော်စာတွေ မတင်ရဲ ပါဘူး…ခဲ နဲ့ ပေါက်မှာသိတယ်။။။
ဒါပေမယ့်..စာတွေ ဖတ်ရင်းလူတစ်ယောက်စိတ်ကိုသိနိုင်ပါသတဲ့ ..ဦးဇင်းကောလက်ခံ လား….
ဦးဇင်းဘုရား တပည်.တော် ဖတ်ဖူးတဲ. အကြောင်းလေး လည်းလျှောက်တင်ချင်ပါတယ်
တစ်ခါက တပည်.တော်တို.ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုးကွယ်ရာဘုရားစေတီပေါ. နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်လာရောက်လေ.လာပြီး မှတ်ချက်ချသွားပါတယ် ဗမာလူမျိုးတွေက ဒီအုတ်ပုံကြီးကို ကိုးကွယ်
တာဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး အိမ်ဆောက်တော.လည်း ဒီအုတ်တွေပဲ ခြံစည်းရိုး တံတိုင်းခတ်တော.လည် ဒီအုတ်
တွေပဲ အုတ်အတူတူပဲဟာ ဘာ.လို. နီးနီးနားနား ကိုယ်.အိမ်က အုတ်တွေ မရှိခိုးမကိုးကွယ်ပဲ ဘာ.လို.
စေတီလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်တာလည်းလို. မေးတယ်လို.ကြာဖူးပါတယ်ဘုရား
အဲလိုမေးတာကို ပြန်ဖြေတဲ.သူကလည်း တကယ်ကို ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းတဲ.သူမို. ပြန်မေးသွားတာက
မင်းက ငါ.တို.ဘာသာကို အဲလိုပြောရင် ကျနော်လည်း ခဗျကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားသားကို
မင်းအမေက မိန်းကလေး မို.လား ဆိုတော. နိုင်ငံခြားသာကလည်း yes ပေါ.
မင်းညီမ မင်းအစ်မတွေကလည်း မိန်းကလေး ပဲမလားဆိုတော. လည်း yes ပဲ
မင်းမိန်းမကလည်း မိန်းကလေး ပဲမလားဆိုတော. လည်း yes ပဲတဲ.
ဒီတော. မြန်မာကလည်း ပြန်မေးလိုက်သတဲ. မင်းအမေလည်း မိန်းကလေး မင်းညီမအစ်မတွေလည်း
မိန်းကလေး မင်းမိန်းမကလည်း မိန်းကလေးပဲ အတူတူပဲဟာကို မင်းညဘက်တူတူအိပ်တော. မင်းအမေနဲ.
မင်းအစ်မညီမတွေနဲ. မအိပ်ပဲ ဘာ.လို. မင်းမိန်းမနဲ.အိပ်တာလည်းလို. မေးလိုက်သတဲ.
နိုင်ငံခြားသားလည်း သဘောပေါက်ပြီး အရှုံ့းပေးသွားပါသတဲ.ဘုရား
တပည်.တော်ကတော. မေးတဲ.မေးခွန်းလေးကို တော်တော်သဘောကျမိတယ်ဘုရား အရှင်းဘုရားလည်း
လူတိုင်းက ကိုယ် ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်တာပဲလို.ထင်ပါတယ်ဘုရား အဲလို အုတ်ပုံကိုးကွယ်တယ် ပြောတော. တပည်.တော်လည်း တကယ်ကိုအခံနိုင်ပါဘုရား အခုလို. ဦးဇင်း ရေးပြတာကိုလည်း တပည်.တော်တို. အသိတိုးလို. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား
အပေါ်ကပြောတဲ.ဟာလေးကလည်း ဒီရွာထဲကပဲ ဖတ်ဖူးတာပါဘုရား တော်တော်တော.ကြာနေပြီ
တပည်.တော အဲလိုပြောပြ နှိုင်းပြတော. ငရဲများကြီးနေမလားတော. မသိဘူး
Thanks ရွှေအိမ်စည်. That’s really need it, not only in religious also in life.